Zon'olombelona · Oktobra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Oktobra, 2012
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Oktobra, 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Oktobra 2012
Ireo olona tsy mizaka ny zom-pirenena Ejypta dia ireo olona tsy manana firenena niavina (tanindrazana). Araka ny filazan'ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoa-ponenana (UNHCR), 12 tapitrisa mahery ireo olona tsy manan-tanindrazana manerantany. Indraindray afangaro amin'ny mpitsoa-ponenana ny olona tsy manan-tanindrazana. Na dia izany aza, maro amin'ireo olona tsy manan-tanindrazana no...
Torkia: Gadra Politika Kiorda An-jatony Mitokona Tsy Mihinan-Kanina
Niditra tamin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina intsony ireo gadra politika Kiorda an-jatony, manohitra ny fomba fitondran'i Torkia ireo gadra politika Kiorda. Tamin'ny alalan'ny hetsika nataon'izy ireo, nangataka ny hamerenana ny fitsarana azy sy ny zo hiteny ny sasany, ny hafa kosa maniry ny hisarika ny sain'ny iraisam-pirenena momba ny fomba fitondran'i...
Saodiana mpiaro ny zon'ny vehivavy i Manal al-Sharaif, fantatra tsara amin'ny andraikitra iantsorohany amin'ny hetsika Women2Drive (VehivavyHanamory). Tamin'ny volana Mey 2011, nandrakitra lahatsary ahitana ny sariny izy, izay mihantsy sy manohitra ny fandràrana ny vehivavy tsy hanamory fiara. Taorian'ny famoahana ny lahatsary, nosamborin'ny polisy mpitsikilo izy ary notànana nandritra ny sivy...